Imisa nooc ayey noqon kartaa Xukuumadda Cusub: Qaran-deeq, Beel-deeq & Qurbo-deeq ?) – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Imisa nooc ayey noqon kartaa Xukuumadda Cusub: Qaran-deeq, Beel-deeq & Qurbo-deeq ?)
Xaallad Fool-Siyaasadeed leh ayey noqotay Dhismaha Xukuumadda cusub, waxaana la ogeyn waxa ay ku curan doonto iyo sida loogu caano-maali doono.
RW Xasan Cali Kheyre oo bishan March 1-dii Codka Kalsoonida ka helay Xildhibaanadda BFS ayaa waxa uu u muuqdaa Siyaasi Siyaasad-barad ah iyo Shaqsi aan aqoonin halka uu wax ka ambaqaadi doono.
Waa hubaal RW Kheyre inuu u dhexeeyo Madaxweyne iyo Guddoomiye Barlaman oo kaga khibrad roon Maamulka Siyaasadda, waana arrintaasi waxa seta-dheereynaya inuu soo magacaabi la’ yahay Xukuumadda la saadaalinayo, lana sugi la’ yahay.
Guux-hoosaad ayaa jira in Dhismaha Xukuumadda tahay mid saddex gees ah, iyadoo uu RW hal daraf uun ka hayo Udub-dhigga Xukuumadda Federalka ee horey loo sheegay in loo idmaday.
Qoraalo hordhac oo Liiska Wasiiradda ayaana si hoose loogu dusinayey Saxaafadda, kuwaasi oo ugu yaraan 6 jeer la kansal gareeyey, waxayna Madaxweyne Farmaajo, RW Kheyre iyo Guddoomiye Jawaari noqdeen Farsama-yaqaano midba uu goonidiisa u dejinayo Naqshadda Xukuumadda Cusub iyo Liiska Wasiiradda.
Calawsanaan iyo Aragti is-diidaya ayaana la soo werinayaa iyo in mas’uul kasta doonayo inuu Wasiiro ku yeesho Xukuumadda cusub, iyadoo lagu salaynayo Nidaamka Awood-qeybsiga ee 4.5
RW Kheyre waa la dareemi kara qafladda uu ku jiro iyo sida Aragtiyo cusub loogu camcaminayo, waxayna taasi dhalin kartaa inuu oggol-diidan u noqdo Liis kasta oo Xukuumadda ee la magacaabayo.
Waa Tijaabo Siyaasadeed iyo Talo Hoggaamiye in si xil-ballaarsi leh hal xil loo soo farageliyo, iyadoo lagu hagoogayo Nateexeyn Siyasadeed oo lagu lifaaqay Amar.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan inay miiska saaran tahay Qaab Doorashadda Saddex Xukuumadood oo lagu saleynayo Xukuumad Saami-qeybsi sal-ballaaran leh, ama haddii sifo kale loo dhigayo mid ahaan noqonaysa:
Xukuumad Beel-deeq ah,
Xukuumad Qurbo-deeq ah iyo
Xukuumad Qaran-deeq ah.
Ilo loo qaateen ah ayaa rumeysan in la dhisayo Xukuumad mabda’ ahaan isugu dhafan Qurbo-deeq la sii qabyaaladeeyey.
Waxaa rajo kooban ah in la helo Xukuumad Qaran-deeq ah, waxaana Aragtidaasi loo arkaa mid daaqada laga soo tuuray sidii Jaallayaashii lagu awr-kacsaday Isbedel-doonka loo naafeeyey.
Dowlad-yaqaanka ayaa rumeysan in Xukuumadda Cusub aysan lahayn Asaas xooggan iyo Himilo Hufan, iyadoo Xubnaha Wasiiradda cusub badankooda la sheegay inay yihiin Layli Siyaasad-barad ah oo Hawsha Maamulka Dowladnimo ka bilaabayo Darajadd Xil Wasiirnimo.
Xaalladda ayaana u muuqata Askari aan Layli dhibownimo soo marin oo loo dallacsiiyey Taliye Sare iyo Madaxa Hoggaaminta Difaaca.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa Is-weydiin mudan: Imisa nooc ayey noqon kartaa Xukuumadda Cusub: (Qaran-deeq, Beel-deeq ama Qurbo-deeq?).
Sacuudiga oo dib u bilaabay Shidaalkii ay Masar siin jireen.
Wasaarada Dastuurka Koonfur Galbeed oo xiriirkii wada shaqeyn u jartay Wasaaradda…